Moromaa Hin Feesisu!! – Welcome to bilisummaa
Moromaa Hin Feesisu!!
bilisummaa July 11, 2013	1 Comment
Gaafiin teenya kurfo fedhiin teenya ifaa
Wanni nu barbbaannu bilisummaa qofaa
Wanni fedhe hafee isii arakannu quufa
Wanii isiin achii dhufus booda dhufaa
Waa takalleen feenu isii maleee humaa
Gaafa isii helle abjjuun nuuf guutamaa
Moromaan feesisu numaaf kannuu malee
Baanee harkka duwaa arr’a numan gallee
Previous Gadaan Gadaa Bilisummaati!
Next African exhibit finds home at American Swedish Institute
Walaloo gariidha. ‘Abjjuun’ jecha jedhu san yoo ‘hawwiin’ jette irra bareeda. Abjuun jechuu yaroo rafan wan namatti mullatu. Hawwiin amoo wan fedhan, waan jaalatan jechuudha.